Ejipta: Ny fotoanan’ny Fandresena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Febroary 2011 17:10 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Magyar, polski, македонски, Italiano, Português, বাংলা, Shqip, 繁體中文, 简体中文, English
Ampahany amin'ny fandrakofana manokana ny Hetsi-panoherana Ejipta 2011 ity lahatsoratra ity.
Ny fankalazan'ny vahoaka sy ny fandraketana an-tsary ny fotoanan'ny fankalazana tao amin'ny kianjan'ny Fanafahana
Voalohany dia ity horonantsary nozarain'ny YouTube's Citizen Tube avy amin'ny Twitter ity. Ao anatin'izany, ireo vahoaka mampiato ny fankalazana mandrapaha-tapitry ny vavaka, ary teo izy ireo no velon-kira sy tehaka.
Ny horonantsary manaraka dia avy amin'i bilaogy 3Arabawy ary mampiseho ny fankalazana tao amin'ny Kianjan'ny Fanafahana ihany koa. Avy eo alohan'ny vata fahitalavitra iray ao anatina fitaratra izay mandefa ireo vaovao, amin'ny vahoaka be mitsinjaka sy mifamihina ao an-kianja, ireo vahoaka manofahofa ny saina, mandihy, mifanoroka sy mihiaka :
Teo amin'ny fanakanan-dalàna teo alohan'ny Lapan'ny filoham-pirenena dia nankalazaina ihany koa ity vaovao ity. Ilay olona tao ambadiky ny kamera dia toa taitra ary nanova ny fizotran'ny kamera eo ampovoany, noho izany dia mila manongilana ny lohanao ianao raha te-hahita azy rehetra:
Raha isan'ny fambàra ireo fafana mirehitra avy amin'ny vahoaka mihazona fitaovana finday, dia afaka hijery horonantsary maro mikasika ny vokatr'io fankalazana io ao amin'ny aterineto isika atsy ho atsy.